XOG Xaguu Ku Dambeeyay Mooshinkii ka dhanka ahaa Madaxwayne Farmaajo+Warbixin Xasaasiya – Hornafrik Media Network
XOG Xaguu Ku Dambeeyay Mooshinkii ka dhanka ahaa Madaxwayne Farmaajo+Warbixin Xasaasiya
By HornAfrik	 On Dec 8, 2017
Dhowaan waxaa soo ifbaxay Mooshin ka dhan ah Madaxwayne Farmaajo oo ay wadaan Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia, Iyadoona Mooshinkaasi Diiwaan galintiisa ay ka socoto Magaaladda Muqdisho.
Mooshinka ka dhanka ah Madaxwaynaha oo soo ifbaxay Bishii hore ayaa hadda u muuqda inuu xowli ku socdo, Waxaana sii kordhaya tiradda Xildhibaanadda is qoray Mooshinkan oo qaarkood ay ka tirsan Xukuumadda.
HornAfrik ayaa ogaatay in hadda saxiixa Mooshinka ka dhanka ah Madaxwayne Farmaajo uu marayo 102 Xildhibaan, kuwaasoo marka ay saxiixaan laga sawirayo ID-gooda, lagana saxiixayo Qoraal ay ku eedaynayaan Madaxwayne Farmaajo, Waxaana jira wali Xildhibaano kale oo doonaya inay saxiixaan, kuwaasoo dalbanaya in lagu daro Saxiixo Mooshinka.
Mooshinka ayaa u muuqda inuu dhaafay Tiradda loo baahnaa inay Mooshin ka gayso Madaxwaynaha, Waxayna taasi muujinaysaa inuu waayay Madaxwayne Farmaaajo kalsooniddii uu ku dhex lahaa Baarlamaankii sida Aqlabiyadda leh u doortay Horaantii Sannadkan.
Mooshinka ka dhanka ah Madaxwayne Farmaajo ayaa laga yaabaa in la gudbiyo ka hor inta aan la xirin Fadhiga Baarlamaanka, balse ma cadda in Baarlamaanka la hor gayn doono inta uusan fasaxa galin, Waxaana laga yaabaa in Mooshinka ay guda galaan Baarlamaanku marka fasaxa ay ka soo laabtaan Xildhibaanadda.
Mooshinkan ayaa ku saabsan Kalsooni kala noqoshadda Madaxwayne Farmaajo oo lagu eedeeyay inuu ka xudgudbay Qodobo Dastuuri ah oo qaarkood laga soo daliishaday Dastuurkii 1960-kii, Waxaana Madaxwaynaha lagu eedeeyay Qiyaano Qaran, Ku Xadgudub Dastuur, Lunsasho Dhaqaale Dadwayne, Ku Tagri Fal Awoodeed, Xil Gudasho La’aan, Awoodiisii oo ay isticmaalayaan Dad aan la dooran iyo Qodobo kale oo dhamaantood haddii uu aqbalo Baarlamaanku noqonaysa inay ku cadaatay Madaxwaynaha Dambiyo Culus.
Mooshinkan ayaa haddii uu qabto Guddoonka Baarlamaanka waxaa laga yaabaa in Madaxwaynaha uu si KMG ah u waayo Awoodihiisa qaar, maadaama lagu soo oogay Eeddo waawayn, Waxaana inta ay arrintiisu dhinac u dhacayso uu ahaanayaa Madaxwayne Sharafeed aan wax saxiixi Karin.
Madaxwaynaha sidoo kale wax awood ah kuma yeelan doono Maamulidda Dhaqaalaha Wadanka, mana gali karo Heshiisyo Caalami ah, sidaas si la mid ah waxaa isna wayn doono Awoodihiisa Dastuuriga ah Raiisul Wasaaraha oo si KMG ah u sii joogi doona Xafiiska inta uu Madaxwaynuhu ka gudbayo Mooshinka Baarlamaanka ka yaala.
Sida uu qabo dastuurka Mooshin ama Imbeachment laga keeno Madaxweynaha ayaa u baahan inay marka hore saxiixaan illaa 92 Xildhibaan, Waxaana muuqanaysa in hadda Tiradaasi uu dhoofay Saxiixa Mooshinka oo Dhaqaale xooggan ay ku bixinayaan Siyaasiyiin isku aragti ka ah in la rido Farmaajo, balse kala Ajandayaal ah, kadib ridista Farmaajo.
inta la og yahay Soomaaliya Dowladihii Rayidka ahaa ee isaga dambeeyay Dalka waxay dhamaysteen intooda badan si sharci ah Waqtigooda, marka laga reebo C/rashiid Cali Sharmaake oo la dilay, iyo C/laahi Yuusuf oo is casilay, halka Madaxwaynihii Milatariga ahaana ee Maxamad Siyaad Barre ay afgambiyeen Jabhado Hubaysan, Waxayna tani haddii ay suuragasho ay noqonaysaa markii ugu horaysay ee Madaxwayne Soomaaliyeed oo la doortay isagoo aan waqtigiisa dhamaysan laga qaado Xilka si Sharci ah, iyadoo uusan Dhiman, isna casilin, Awood Ciidana aan lagu ridin, taasoo ah Saddex Arrin oo looga horeeyay, balse waa Ugub in Madaxwayne Taladda haya uu waayo Kalsoonidda Baarlamaanka oo sidaas uu ku dhaco, isagoo aan dhamaysan Waqtigii loo doortay Talladda inuu hayo.
Dowladda Somalia oo oggolaatay in dib loo soo celiyo 93 Soomaali Qaxooti ku ahaa Maraykanka.
Muqdisho oo lagu qabanayo bannaanbax ka dhan ah go’aankii Trump ee Qudus.